Notsarovana Ilay Mpandalim-baovao Mikasika Ny Tantaran’i Sainte Lucie · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Mey 2013 11:03 GMT
Iray amin'ireo mpikambana mpamorona tao amin'ny Foibe fikarohana ao Sainte-Lucie sy ny Fiarovana ny vakoka any Sainte Lucie izy, izay niandraiketany ny toerana maha-filoha nandritra ny taona maro, Devaux ihany koa dia mpanoratra boky maro mikasika ny tantara manan-karen'ilay nosy, anisan'ny nosoratany farany ny taona 2012 ny “Tantara irain'i Sainte Lucie”.
Fitantaràna mikasika ny fiainana manokany nalefan'i Tony Williams tao amin'ny bilaogy Caribbean no nanasongadina ny fandraisana anjaran'i Devaux tamin'ireo fikarohana tao Sainte-Lucie:
Teraka tao Castries tamin'ny taona 1934, M. Devaux dia nanokana betsaka tamin'ny fiainany hianarana sy hanadihadiana ny tantaran'i Sainte-Lucie sy ny fonenana araboa-janahary ary ireo biby sy zava-manirin'ilay nosy, hatramin'ireo lovan-kolontsaina isankarazany sy manankarena ao. Izy dia mpiaro mafana fò ho fiarovana ny vakoka ara-kolotsainan'ny nosy sy ireo vavolombelona navelan'ny tantara. Miaraka amin'ireo hafa mpandala tontolo iainana avy ao an-toerana, nitàna andraikitra goavana tamin'ny fanampiana ho fanairana ny sain'ny vahoaka izy ny amin'ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny tontolo iainana tsy manam-paharoa ao Ste Lucie, ny biby an-ala sy ireo tontolo hita maso.
Ny lahatsoratra koa dia namoaka ny asany mikasika ny arkeolojika:
Injeniera iray niofana teny an-kianja, M. Devaux dia mpandray anjara tsy hay notohaina tamin'ireo fikarohana ny vakoka tranainy fonosin'ny tany. Izy no nahitàna ny marobe tamin'ireo toerana manan-tantara, isan'ireny ny rakitry ny ela taminn fiantombohan'ny Arawak sy ireo toeram-ponenana Karaiba ary ireo ala fiafenan'ny jiolahy, ireo andevo taloha nandositra izay noheverina ho toy ny niady voalohany ho amin'ny fahafahan'ny nosy vokatry ny fanoherana sy ny fikomiana nanohitra mafy ireo famoretana an-kerisetra nataon'ny Frantsay sy Britanika mpanjanaka sady mpamboly tany afovoany ka hatramin'ny fiafaran'ny taonjato faha-18.
Ny pejy Facebook-n'ny Lighthouse Road Publications, izay najoro mba hamoahana ny “Tantara irain'i Sainte Lucie”, dia misy koa ny vaovao mikasika ny asan'i Devaux:
Ny taona 1961, Devaux dia nanorina ny Foibe Fikarohana tao St Lucie (tafiditra ho anaty rafitra tamin'ny taona 1994), namokatra tahirin-kevitra ampolony maro mikasika ny fikarohana misandrahaka amina lohahevitra maro isankarazany, matetika dia tohin'ny fangatahan'ny governemanta, ireo vondron'olona voafaritry ny lalàna na ireo olona mahaleotena mba te-hahazo vaovao mikasika ny (indraindray tsy dia mazava) antsipirihan'ny lasan'i St Lucie fahiny. Ny ampolotaonany tamin'ny fikarohana lalina nolaniana tamin'ireny tahirin-kevitra ireny dia nampiasaina tamin'izay tokony ho izy tao anatin'ny “Tantara irain'i St Lucie”, izay niarahan'i Robert nanoratra tamin'i Jolien Harmsen sy Guy Ellis.
Araka ny fanomezam-boninahitra nalefa tao amin'ny Facebook, Devaux dia niasa mafy mba hiarovana ny harem-pirenen'i Sainte-Lucie, na dia ohatran'ny tsy dia nisy dikany aza izany indraindray:
Nampalahelo anefa, nandany andro maro izy niady ny mba ho henoina. Eritrereto hoe firy amin'ireo harem-pirenentsika no mety ho voaaro ho an'ny taranaka ho avy raha efa nisy olona maro toa azy. Resy tamin'ny adiny sasany izay tena mafy izy: fony nanandrana ny hampiatoana ny fanorenana teo anelanelan'ny Pitons izy, dia nesorina tamin'ny andraikinytao anatn'ny filankevi-pitantanan'ny Sampandraharaha Mpanara-maso ny Fampiroboroboana; ny tolo-keviny mikasika ny hamoronana faritra mando any La Tourney dia nadaboky ny Tompon'andraikitry ny seranana, ary ny ezaka nataony mikasika ny fiarovana ny East Coast Trail (lalan-tany mirefy efatra maily izay namboarin'ny tànany samirery) niantefa teny an-tsofin'ny marenina fony nanomboka niteny ny mpanorina ny Le Paradis.
Nitohy ny fanomezam-boninahitra:
Nanana vina izy ho an'i Sainte-Lucie – izay nametrahany ny tahirim-bakoka sy ny fiarovana ny harem-pirenena hifanindran-dàlana amin'ny fampandrosoana. Miaina amin'ny zava-misy izy: tsy mbola nanandrana velively nanakana ny fampandrosoana izy, fa nanindrahindra ny fampandrosoana maharitra aza. Tsy mbola nandà tetikasa izy nefa tsy nandroso setriny hafa ho solony, izay itokisana fa hahatratra ny tanjona ara-toe-karena mitovy tsy manimba ny harem-pirenena. Kivy izy fa impiry moa isika no nosakantsakanana, nefa izy maniry antsika mba hiady ho an'izay kely tafajanona eny amin'ny morondranomasintsika, ny alan-tsika any amin'ny faritra mafana, ireo bibin-tsika ary ireo toerana manan-tantarantsika. Nino izy fa adidintsika ny manao izay hahatsara kokoa ny faritra kelintsika eo anatrehan'izao tontolo izao. Tena efa nanao izany izy.
Robert Devaux dia nahazo mariboninahitra marobe, anisan'izany nanomezana azy ny mariboninahitra ambony “Officier”-n'ireo izay Mendrika Indrindra Order of the British Empire (OBE) ny taona 1991.
Ny hajiantsary nampiasaina tamin'ity lahatsoratra ity, “Setting Sun – St. Lucia – Pitons – View”, dia an'i Jason Michael, nampiasaina teo ambany lisansa Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic Creative Commons license. Tsidiho ny tahirin-tsary mifandimbin'i Jason Michael ao amin'ny flickr.